Iprojekthi yeYunnan Xinping yeHlathi yeHlabathi yeBhola yeBhola yeBhola yeProjekthi
Umgangatho wokukhanya sisalathiso esibalulekileyo senqanaba lamaziko ezemidlalo. Kwibhola ekhatywayo, ukukhanya kwebala lezemidlalo kubaluleke ngakumbi. Kutshanje, i-UNIKE igqibe ngempumelelo iXinping County Forest Sports Pa ...
Iprojekthi yokuLungiswa kwezibane zeXiangtan yangaphakathi
Kutshanje, iprojekthi yokulungiswa kokukhanyisa ukukhanya kweNdawo yeNdawo yeHunan Xiangtan iphumelele ngempumelelo ukwamkelwa kwaye yasetyenziswa ngokusesikweni, neyamkelwa kakhulu yaza yaqinisekiswa ngabathengi. I-UNIKE ibonelela ngesisombululo esipheleleyo sokukhanyisa iXiangtan esendlwini ...
YINTONI i-SMD LED?
Izixhobo ezingaphezulu komhlaba, iiDayethi eziKhanyisiweyo zokuKhanya I-SMD ye-LED yincinci encinci kwaye ilula yokulinganisa i-chip efakwe kwi-epoxy resin. Oku kubonelela ngokuqaqamba ngelixa kugcinwa ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi xa kuthelekiswa nolunye uhlobo lweebhalbhu (umz.